Amaqhosha eLabhanti oLayisha amaLuntu ngeNtlalo.js | Martech Zone
Amaqhosha eLabhanti oLayisha amaLuntu ngeNtlalontle
Lwesine, ngoFebruwari 28, 2013 NgoMvulo, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Namhlanje bendinosuku olumnandi kunye neqela lewebhu kuluhlu luka-Angie. Uluhlu luka-Angie luphuhlise indawo yabo ukuba ibe lilayibrari yezixhobo engaqhelekanga… kwaye ngalo lonke elixesha baqhubekile bekhawulezisa indawo yabo. Amaphepha abo alayisha ngesantya esingaboniyo. Ukuba awundikholelwa, vela eli phepha Iminyango yeGaraji.
Eli phepha libandakanya imifanekiso, ividiyo, kunye namaqhosha entlalontle… kwaye isalayisha kwimillisecond. Ukuthelekisa indawo yabo kunye neyam kufana nokubaleka i-Prius ene-F-16. Azikenziwa okwangoku, nokuba, zihlala zikhangela iindlela zokuphucula amava abathengi kunye nokufumana umxholo kunye nokwabelana.
Asinalo iqela lophuhliso olusisigxina okanye izixhobo zenkampani yoluntu, ke inkqubela phambili yethu icotha kancinci kunoluhlu luka-Angie. Sinombuki zindwendwe ongathandekiyo Flywheel -Kusebenzisa i-caching yabo esele ihambile kunye ne-CDN, kodwa siyazi ukuba kusekho ezinye izinto ezisonzakalisayo. Umzekelo, imifanekiso yethu ayilungiswanga. Kukho iinkonzo ezikhoyo apho unokuguqula imifanekiso yakho ibe sisiqwengana sobungakanani bayo ngelixa ugcina ukucaca kwayo… sijonge kubo.
Njengoko ndandibabonisa indawo yethu, ndaye ndagobhoza kwaye ndayixhoma intloko yam xa iphepha lalingumkhenkce xa kulayishwa iqhosha loluntu. Ndicinga ukuba yayiyi-Facebook. Argh… umzuzwana okanye emibini kamva kuye kwavela iqhosha kwaye iphepha lonke lilayishiwe. Ugh.
Xa ndichaza umba, injineli yabo yakhawuleza yanesisombululo, intlalontle. I-Socialite ibonelela ngendlela elula kakhulu yokuphumeza kunye nokwenza kusebenze ubuninzi bamaqhosha okwabelana ngokwasentlalweni- nangaliphi na ixesha onqwenela ngalo. Kumthwalo woxwebhu, kwinqaku lokuhambisa phezulu, kuwo nawuphi na umsitho! Ukusukela ekubeni intlalontle ilayisha amaqhosha ngokungqinelanayo, uxwebhu alunakuxhonywa ngelixa ulinde i-50kb yemidiya yoluntu.
Ngombulelo, sele ikhona iplagi yeWordPress ebandakanya iSocialite, ebizwa WPSocialite. Ngobu busuku ndiyikhuphe yonke ikhowudi yam eyenziwe ngokokulayisha amaqhosha kunye nokuphunyezwa kweWPSocialite. Ndikwazile ukwenza i-CSS ngokwezifiso kwaye ndaguqula amaqhosha endiwafunayo. Ndijonge phambili kumaqhosha ongezelelweyo kwixesha elizayo- njengeBuffer okanye iReddit… kodwa oku kulungele okwangoku!
Kungenxa yokuba uGoogle uthe njalo